Yang Quanlu dia nasaina hanatrika ny seha-pifaneraseran'ny «tanke vaovao + fananana ara-tsaina hampandroso ny indostria avo lenta» ary nanao kabary
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-04-10
Tamin'ny 3 Janoary 2020, Yang Quanlu, filohan'ny quangong Tools Co., Ltd., dia nasaina handray anjara amin'ny valan-dresaka ho an'ny «fisainana vaovao + fananana ara-tsaina hampiroborobo ny indostria avo lenta» natao tao amin'ny Beijing People's isan'andro. Nandray an'i Tao liming, tonian-dahatsoratry ny ...
2020, andao hanohy hanohy ny nofinofintsika, tsy hamoy ny fotoantsika!
avy amin'ny admin tamin'ny 20-04-09
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, ny pnemonia coronavirus vaovao dia niantraika tamin'ny fon'ny firenena iray manontolo. Nandritra ny vanim-potoana sarotra niadiana tamin'ny valan'aretina, ny asa manontolo dia namaly ny antso nataon'ny governemanta, ary teo ambany fitarihan'ireo mpitarika ny orinasa, dia nandray andraikitra mavitrika ary nivoaka avokoa ...
Taratasy fiderana an'i Guo long, minisiteran'ny fiarovana sy tontolo iainana
avy amin'ny admin tamin'ny 20-04-07
Nandritra ny vanim-potoana goavambe misy ny pnemonia vokatry ny karazana coronavirus, dia namaly tamim-pahavitrihana ny antson'ny governemanta ny orinasanay, nanakana tanteraka ny fiparitahan'ny valan'aretina haingana, ary nanome toky fa ny fandresen'ny valan'aretina sy ny valan'aretina dia naharesy tanteraka. Situatio Epidemika ...
Miray hina hiady amin'ny "valan'aretina"
Miaraka amin'ny fisorohana ny valan'aretina pnemony vaovao coronavirus vaovao sy ny asa fanaraha-maso niditra dingana lehibe, ny mpiasa iray manontolo dia nandinika tsara ny asa fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina. Yang Zhanfei, tale jeneralin'ny orinasa, nikarakara fivoriana an-tserasera maro handaminana ny fametrahana ny t ...
Misaotra anao nivory soa aman-tsara
Tamin'ny 18 Janoary, noravahana jiro ny efitrano malalaky ny Hotel Nanhe, ary mpiasa maherin'ny 100, ao anatin'izany ny mpitarika manontolo, ny mpamatsy sasany ary ny maodely faran'izay tsara, no nivory tao amin'ny efitrano falifaly. Notanterahina teto ny fankalazana ny faran'ny taona 2019 sy ny fankasitrahana ny mpiasa. Tamin'ny 17:00 alina, ny pa ...
Quangong Tools Co., Ltd. Mandray anjara amin'ny Tsenan'ny Import sy Export any Shina
Ny dingana voalohany amin'ny China Import and Export Fair (Canton Fair) tamin'ny taona 2019 dia tonga ara-potoana. Goavana indostrialy an'arivony sy marika malaza amin'ny fitaovana enti-miasa, milina, kojakoja fiara, akora fananganana ary indostrian'ny jiro mivondrona eto. Quangong Tools Co., Ltd. dia miorina amin'ny faritra C an'ny fitaovana ...
Quangong Tools Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny Shanghai Cologne International Hardware Exhibition
Mba hampiroboroboana ny fampandrosoana haingana ny orinasam-pandraharahana, ny orinasa dia nandray anjara tamin'ny Fampirantiana Hardware International Shanghai Cologne 2019 tamin'ny 10 Oktobra hatramin'ny 12 Oktobra, miaraka amin'ny mpanjifa vaovao sy taloha maherin'ny 30 ary famindram-bola mihoatra ny 5 tapitrisa yuan. Manomboka ny 10 Oktobra ka hatramin'ny 1 Oktobra ...